Gobdoonna ma Galbaday? W/Q: Saki Cali Gurey​ | Laashin iyo Hal-abuur
Gobdoonna ma Galbaday? W/Q: Saki Cali Gurey​
“Waa ayaanba ayaan
Duni aakhir sabaan
Ninna aanu lahaan
Dhabna looga idlaan!”
Waayadii u danbeeyay ummadda Soomaaliyeed, waxaa hareeyay tiiraanyo iyo murago ay ku reebaysay mar kasta, geerida sidii tusbax go’ay u galaafatay haldoorka ummadda, geeridaas oo si gaar u beegsanaysay rug-caddaagii halabuurka, fanka iyo suugaanta Soomaalida, iyada oo wali lagu jiro baroordiiqdii Allaha u naxariistee Abwaan Cali Sugulle Duncarbeed, ayay geeridu Xaaji Cabdi Gobdoon timid, taasoo sii kordhineysa welwelka laga qabo cimri degdegga ku yimid caqligii iyo garaadka ummadda Soomaaliyeed, iyada oo aan wali laga weeleyn aqoontooda.
Xaaji Cabdi Gobdoon, waxa uu waxbarashada aasaasiga ilaa dugsi sare ku qaatay magaalada Muqdisho, gaar ahaan dugsiga Leegada, halkaas oo uu macallin ka noqday markii dambana. In muddo ah markuu bare ahaa ayuu u diga-rogtay dhanka warbaahinta ,oo sanadkii 1961 ayuu ku biiray raadiyow Muqdisho.
Mar labaad sanadkii 1967 ilaa 1971-dii ayuu dib uga shaqeeyay raadiyow Moscow laanta af Soomaaliga, halkaas ayayna is ku barteyn kuna saaxiibeen Georgi Kapchits oo ah qoraa Ruush ah oo ku hadla waxna ku qora Afka Soomaaliga, buugaagta uu Georgi qoray waxaa ka mid ah “Qaamuuska Maahmaahyada Soomaaliyeed” oo ah qaamuuska ugu weyn ee maahmaah iyo oraah Soomaaliyeed lagu aruuriyo. wWaxaa xusid mudan, in Xaaji Cabdi Gobdoon uu ka mid ahaa dadkii ku caawiyay Georgi Kapchits barashada afka Soomaaliga.
1971 ayuu dalka dib ugu soo laabtay ka dib markii ay u yeertay dowladdii kacaanka. Sanadkii xigay, madaxweyne Jeneraal Maxamed Siyaad Barra ayaa u magacaabay, in uu noqdo wariyihiisa gaarka, waxaa uuna howshaa u igmanaa ilaa 1982.
Xaaji Cabdi Goobdon Inta uu ku jiray howla , waxa uu tababbaro aqoon kororsi ah u aaday waddammo badan, oo ay ka mid yihiin Masar, Ruushka, Talyaaniga iyo Mareykanka. Warfaafinta ka dib markii laga soo tago Xaaji Cabdi Gobdoon waxa uu noqday agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo Isboortiga.
W/Q: Saki Cali Gurey​